China yakachena uye yakasikwa menthol crystal / L-menthol 99% nemutengo wakanaka cas 2216-51-5 fekitori nevatengesi | Dzidziso
yakachena uye yakasikwa menthol crystal / L-menthol 99% nemutengo wakanaka cas 2216-51-5
L-Menthol, chinhu chinogadzirwa nemakemikari, isina kuchena acicular crystalline kana granular.Ndicho chikamu chikuru che peppermint uye peppermint yakakosha mafuta. Iko kune yemahara uye ester nyika. Menthol ine masomeri masere, ayo ane akasiyana hwema hunhu. L-menthol ine menthol hwema uye kutonhodza mhedzisiro, racemthol zvakare ine kutonhodza kushanda, uye mamwe maomomers haana kutonhodza maitiro.Inogona kushandiswa seinodonhedza mushonga wemazino, pefiyumu, chinwiwa uye zvihwitsi. ganda kana mucous membrane uye kuve nekutonhora uye antipruritic mhedzisiro; Inogona kushandiswa kune musoro, mhino, pharynx uye laryngitis.
Chemical Zita: L-menthol, menthol kristaro
Molecular fomula: C10H20O
Kuchena: 99% min
Mentholinogadzirwa mumashizha, chinhu chikuru mumafuta epepermint, uye ndeimwe yeiyo cyclic monoterpenes. Iyo mafuta akatsetseka anokosha anogadzirwa nemiti, kazhinji anoumbwa nehemiterpene, monoterpene uye sesquiterpene, kunyanya mune inodziya mamiriro ekunze. Mimwe michero yakakosha yemiti ndeye terpenoid kana makomputa ane mapoka eterpenoid.
L Menthol Crystal iri kutonhodza, inozorodza, uye ine inonhuhwirira yakasimba inonhuhwirira. Ivo anowanzo shandiswa mune zvekuzora, sarves, balms, mishonga yakashongedzwa, huro lozenges, mushonga wemazino, kushambidza muromo, chingamu, tsoka tsoka, kupora kwekurwadziwa kana kutonhodza zvigadzirwa zvemuviri, shampoos, ma conditioner, liniment, kuveura mafuta ekuzora, emuromo kana epahuro mapiritsi. mafuta, uye kutonhora gels. Menthol makristasi akanakisa kuti ashandiswe mune izvi zvigadzirwa kubatsira kubvisa tsandanyama aches uye nemarwadzo, kukosora, kuzara, dzihwa, uye kwepamusoro matambudziko ekufema. Sezvo Menthol makristasi akaomeswa zvakanyanya, inongova shoma shoma shoma inodiwa mukati mezvigadzirwa. Paunenge uchitenga Menthol makristasi yeuka kuti yakanaka mhando menthol kristaro inowanzo ine isingasviki 99.4% menthol.
1.Menthol inobatsira pakuzvimba kweziso, pahuro, maronda mumuromo;
2.Menthol inoshandiswa kurapa rubella gwirikwiti; kusagadzikana nekunzwa kwekutenderera mubhokisi uye munzvimbo dze hypochondriac;
3.Menthol ine mashandiro emusoro mufuruwenza, yepamusoro yekufema hutachiona uye zvimwe hosha dzechirwere chefebrile padanho rekubata.
1kg / bhegi, 25kg / katoni
isina kuchena acicular crystal, ine hunhu mint kunhuhwirira
Asina kugadzikana Masara,%
1g sampuro yakasviba mu5ml 90% ethanol
Ichi chigadzirwa chinoyedza maererano ne <Pharm.standard> Kuchengeta: gara munzvimbo inotonhorera, yakaoma uye ine shading.
100% Yakachena Natural Beta Pinene Mune Bulk CAS 127-91-3
Chemishonga Giredhi Thymol Crystal Powder Cas 89-83-8
100% Yakachena Uye Yakasarudzika Sinamoni Oiri CAS 8007-80-5
100% Yakachena Uye Zvakasikwa 50% 65% 85% Pine Oiri MuMutengo Wakanaka Cas 8002-09-3
98% Min Leaf Doro Doro Cas 928-96-1 Cis-3-Hexenol
100% Yakachena Natural Alpha Pinene Mune Bulk CAS 7785-26-4
Yakachena Uye Yakasikwa Citral CAS 5392-40-5
100% Yakachena Uye Yakasarudzika Camphor Powder Cas 76-22-2
Pharmaceutic Giredhi Natural Uye Yakachena Borneol / D-Borneol 96%
Pashure: Fekitori inopa yakachena uye yakasikwa Citral CAS 5392-40-5
Zvadaro: Yakachena uye Yemahara dhonza yakakosha mafuta Tea muti mafuta muhuwandu
chemishonga giredhi rechisikigo uye rakachena Borneol / D ...
Fekitori inopa yakachena uye yakasikwa Citral CAS 5392-40-5
Fekitori inopa yakakwira giredhi 95% Phytol mune zvakasikwa w ...
100% yakachena uye yakasikwa Geranyl butanoate cas 106 ...